10 Osisi Ga-egbu Gị - Ugboro Ogba Ugbo
10 Osisi Ga-egbu Gị
N'ebe a n'Ugwu, andlọ na Ugbo, anyị na-elekwasị anya na osisi ị nwere ike iri na-enweghị anwụ.
Mana oge ọ bụla, ọ na-atọ ụtọ ileba anya na ụwa nke osisi, gụnyere ndị nwere ikike ịkwụsị ndụ gị ma ọ bụrụ na ị rie ha. Offọdụ osisi ndị ị ga-agụ n’okpuru ebe a dị oke ụkọ ma ụfọdụ dịkwa mma.
Kedu ụzọ ọ bụla, anyị nwere olile anya na naanị oge ị hụrụ osisi ndị a dị na foto dị n'okpuru!
A makwaara dị ka Tones Boneset ma ọ bụ White Sanicle, White Snakeroot dị oke nsi. Ọ bụ nwa afọ North America osisi na-acha ọcha okooko osisi na, ozugbo ha na-ama ifuru, hapụ obere mkpụrụ na-efegharị na ifufe.
nri kachasị mma maka ọnyà na ọnyà hornet
Ha jupụtara na ya tremetol , nke na-anaghị egbu mmadụ ozugbo. Kama nke ahụ, anụmanụ dịka ehi na-eri White Snakeroot ma na-amị tremetol na anụ ha na mmiri ara ehi ha. Mgbe anyị nwere mmiri ara ehi ma ọ bụ gbuo ehi ndị a ma rie anụ ha ma ọ bụ mmiri ara ehi ha, tremetol na-abanye ahụ anyị ma na-ebute ọrịa mmiri ara ehi, nke bụ aha na-ada ụda maka oke nhụjuanya na-egbu egbu.
Eziokwu Plant: Mama Abraham Lincoln nwụrụ site n'ọrịa ara ehi.
Anya nwa bebi
A makwaara osisi a na-achọ egwu dị ka White Baneberry. Ọ bụ nwa amaala na mpaghara ugwu ọwụwa anyanwụ nke North America. Anyị echeghị na ịchọrọ nkọwa maka ihe kpatara eji akpọ ya Anya nwa bebi - ọ kpuchie ya na mkpụrụ osisi na-ele anya na-ele anya dị ka onye gbapụrụ eyeballs nke ụmụaka ha ji egwuri egwu nwata wee rapara ha n'osisi.
Osisi niile ahụ na-egbu mmadụ, mana mkpụrụ osisi kachasị egbu egbu. Childrenmụaka na-enwekarị nsogbu n'ihi ụtọ ụtọ nke mkpụrụ osisi na-aghọgbu ha iche na ọ bụ oriri. N'elu nke ahụ, iri mkpụrụ osisi ahụ nwere ike ime ka akwara obi belata, na-akpata ọnwụ ngwa ngwa.
nwere ike ọsụsọ a beụ na-agba agba karịa otu oge?
Opi Angel na-ada na South America ma mara ezigbo mma. Ifuru nwere ike ịbụ pink, odo, oroma ma ọ bụ ọcha. A na-ejupụta osisi niile na toxins dị ka scopolamine na atropine, agbanyeghị na ha anaghị egbu egbu dị ka osisi abụọ anyị lere anya ugbua. N'ezie, ụfọdụ omenala na-eme ka okooko osisi ghọọ tii hallucinogenic. Ọ dị oke egwu ịnwale nke a n'agbanyeghị, n'ihi na ọ na-esiri ike ịchọpụta ọkwa nke toxins site na osisi ruo na osisi.
Imirikiti ndị mmadụ maara osisi a dị ka bọtịnụ Quaker ma ọ bụ nsị na-egbu egbu. Ọ bụ osisi dị larịị nke a na-ahụkarị na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia na India. N’ime mkpụrụ osisi ahụ, e nwere mkpụrụ osisi na-egbu egbu nke ukwuu jupụtara na strychnine na brucine.
Ngwunye nke dị ka 30 mg nke toxin ga-egbu onye toro eto. Ma ọ bụghị ọnwụ na-egbu mgbu dị ka ụfọdụ osisi ndị ọzọ na-egbu egbu. Ọ bụrụ na ị rie ọgwụ na-egbu egbu nke mkpụrụ ndị a, ị ga-enwe mkpali ime ihe ike, nke na-enweghị ike ịchịkwa ya ruo ọnwụ.
gịnị bụ ntakịrị ahụhụ nta ndị a na osisi m
Osisi a nke pere mpe sitere na Southwest Asia, Northern Africa, na Europe - yabụ ọkara ụwa. Nanị akụkụ nke osisi ahụ na-adịghị egbu egbu bụ mkpụrụ osisi gbara gburugburu mkpụrụ ndị ahụ. Nnụnụ na-erikarị mkpụrụ ya ma gbasaa mkpụrụ ahụ na-anwụ anwụ.
Ihe dị ka 50 g nke mkpụrụ ahụ ga-eme ka iku ume siri ike, ịma jijiji, ịma jijiji, na ịda. Ga-anwụ site na nkụchi obi na njedebe. Ọ bụrụ na i rie oke, ị nwedịrị ike ịwụga ozugbo na nkụchi obi!
A maara Hemlock ogologo oge dị ka osisi na-egbu egbu, ma mmiri mmiri ahụ dị iche iche. A makwaara dị ka parsnip nsi, osisi ndị a bụ ụmụ amaala na mpaghara dị jụụ nke ugwu ugwu. Ha dị mfe ịchọpụta n'ihi obere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ọcha na-acha ọcha dị ka nche anwụ.
O nwere aha osisi kacha egbu egbu na North America, juputara na cicutoxin. Cicutoxic na-ebute njigide dị ike, ọgbụgbọ, agbọ agbọ, na mgbu afọ. Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, ị ga - anwụ site na iku ume iku ume ma ọ bụ ventricular fibrillation naanị awa ole na ole ị ga - eri ya. Zere nke a na ụgwọ niile, ọkachasị mgbọrọgwụ (nke kachasị egbu egbu).
Wolfsbane nwere ọtụtụ aha: agụ owuru, okpu ekwensu, ma ọ bụ nwanyị. Ọ bụ n'ezie nke ezinụlọ buttercup, mana ọ ga-egbu egbu karịa ifuru na-atọ ụtọ. Ha sitere na mpaghara ugwu di na mpaghara ugwu.
esi mgba ụtọ nduku osisi vaịn
Ha juputara na alkaloid pseudaconitine, nke eji na Japan oge ochie dika nsi nke ichu nta. Ọ bụrụ n’inweghị obi ọjọọ ịtinye nsị ahụ, ị ​​ga-eche na akụkụ aka gị na afọ gị na-agba ọkụ. Ọ bụrụ na ị na-eri oke nsị (na-adịkarị na 20ml), ị ga-anwụ n'ime awa 2-6.
O yiri ka ọtụtụ n'ime osisi ndị a na-egbu egbu nwere ọtụtụ aha, na Rosary Pea abụghị otu. A makwaara ya dị ka Jumbie bead ma ọ bụ anya Crab ma bụrụ osisi nke na-eto gburugburu osisi ndị ọzọ ma ọ bụ ahịhịa. A na-ahụkarị ya na Indonesia, mana egosila n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa.
A na-eji mkpuru ya eme ihe dị ka chaplet, mana enwere abrin, nsi nke yiri ricin. Ọ bụrụ na ị hụla Breaking Bad, ị ga-ama ihe mgbaàmà ahụ. Nanị ihe dị iche? Abrin ji okpukpu 75 dị ike karịa ricin - yabụ na microgram 3 nwere ike igbu gị kpam kpam.
Onye ọ bụla kpọrọ aha osisi a na-atụ ya egwu. A makwaara Belladonna dika cherị ọnwụ, abalị na-egbu egbu, na mkpụrụ osisi Ekwensu. Achọpụtara ya n’ụwa niile, mana ọ kachasị na Europe, North Africa, na Western Asia. O nwere otu nsị kachasị egbu egbu n'ụwa - Tropane alkaloids.
Ọ bụrụ na ị na-a consụ ya, ụda gị ga-efunahụ gị, ọnụ gị ga-akpọnwụ, ị ga-enwe isi ọwụwa, na n'ikpeazụ iku ume iku ume. Na tomato nwere kasị ala ịta nke toxin, ma ndị ụtọ ma na-adọta ụmụ. Ọ na-ewe mkpụrụ osisi 10-20 iji gbuo mmadụ… ma ọ bụ otu akwukwo nke ahịhịa osisi.
Anyị na-ekwu maka rxin nsị mgbe anyị kwuru banyere abrin toxin, ebu na Rosary Pea. Castor osisi nwere obere ike toxin ricin. Ọ na-etinye uche na mkpụrụ, nke 1 dị ike iji gbuo gị naanị n'ime awa 48.
Ọ gaghị abụ ọnwụ ngwa ngwa, ma. ’Ll ga-anụ akpịrị na ọnụ gị na-agba ọkụ, mgbe ahụ afọ gị ga-afụ ụfụ, mgbe ahụ ị ga-agbapụta ọbara. Nweghị ike ịkwụsị usoro ahụ na ihe kpatara ọnwụ bụ akpịrị ịkpọ nkụ. Ọ bụ ihe ndekọ ụwa dị ugbu a dị ka osisi kachasị egbu egbu n'ụwa.
otú e si wuo obere griin haus na pvc pipe
olee mgbe ị na-ifatilaiza tomato
eme ẹgu agha dụkota ndzụ
tufuo oke na ugbo